Iindlela ezimbini eziSebenzayo zokuKhulisa uLuhlu lwakho lwe-imeyile | Martech Zone
Iindlela ezimbini eziSebenzayo zokuKhulisa uLuhlu lwakho lwe-imeyile
NgoLwesithathu, Septemba 14, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Sikhula ngokukrakra kwinkqubo yethu yeendaba ze-imeyile kwaye ndiyavuma ukuba ndiza… ndongeza abantu kwi-yethu Martech Zone newsletter yinke imihla. Ngapha koko, sikhule saya phantse kwababhalisi be-3,000 kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo! Okubaluleke ngakumbi, ukuba izithuthi ziyaqhubeka nokuqhuba ababhalisile babuyela kwibhlog yethu nakubathengisi bethu nakubaxhasi. Ukuba awunayo inkqubo ye-imeyile yokufaka abantu kwaye ubabuyisele kwindawo yakho, ibhlog okanye uphawu ... uphulukana nabathengi abaninzi.
Ezona ndlela zimbini zikhawulezayo zokukhulisa uluhlu lwethu lweendaba kuku:
Ukongeza lonke unxibelelwano olufanelekileyo esifikelele kwindawo yethu okanye nge-imeyile. Oku kubandakanya neengcali kwezonxibelelwano noluntu ezinxibelelana nathi ukufaka imibono yebhlog (malunga neyure nganye).
Yongeza wonke umntu kwinethiwekhi yam - Kwincwadi yam yedilesi kunye ne-LinkedIn. Into enomdla kukuba, ndibambe i-imeyile kumfana ohambisa i-imeyile endiye ndongeza malunga neenyanga ezi-6 ezidlulileyo… kodwa akazange ayongeze i-imeyile kwifolda yeJunk, walula kakhulu, wandibiza ngamagama kwi-Intanethi, emva koko wemka (ngombulelo ).
Isebenza kakuhle kangangokuba ndinqwenela ukuba bendinendlela ezenzekelayo yokuyifumana isebenze. Ndinqwenela ukuba ndibenesixhobo esivuna zonke ii-imeyile ezingenayo kwaye ndongeze umntu lowo kuluhlu lwam lweendaba. Into ebangela umdla kukuba ndiyibonile GetResponse yongeze indibaniselwano efanayo nale kwiqonga labo le-imeyile. Ngasekunene yiyo yonke imithombo abanokuthi abasebenzisi be-GetResponse bayitsale kubabhalisi kuyo.
Ukuba ababhalisi bam abatsha bafumana i-imeyile kwaye abayithandi? Akukho zinkxalabo- banokungabhalisi ngokulula. Le yinto eyamkelekileyo kushishino… kodwa ayisoloko icetyiswa. Ukuba ucinga ukuba oku kuyothusa (njengoko uninzi lweengcali zokuhanjiswa kwe-imeyile), andikhathali. Ndizikhulisa zombini iincwadana zethu, ndikhulisa ukugcwala kwam kwisiza KUNYE ndisagcina ukuvuleka okumangalisayo kwaye ndicofa amaxabiso. Kananjalo, ndiyaqhubeka nokuba ne-0% yezikhalazo kwaye ireyithi yam yokungabhalisi yayingu-0.41% kwileta yokugqibela endandiyithumele.
Isitshixo sayo yonke le nto, ewe, iphindwe kabini:
The umgangatho womxholo kwincwadana yethu. Kufanelekile. Lixesha elifanelekileyo. Kwaye inolwazi kwaye yenzelwe ngokufanelekileyo. Le imeyile yamva nje inyuse umcimbi. Andikhange ndifumane sikhalazo sinye kuphela, abantu abambalwa baguqukile!
The umthamo wababhalisi abatsha Ndongeza iveki nganye incinci kakhulu. Andilahli ababhalisi abangama-10,000 20 'endibafumeneyo' kuluhlu lwam lweendaba… ndongeza abangama-50 ukuya kuma-XNUMX ababhalisi veki nganye kuyo… malunga nomthamo ofanayo naleyo incwadana iyongeza ngokwemvelo.
Itshintshe nyani isimo sam esipheleleyo kwintengiso ye-imeyile. Andisenako ukungena kabini kwaye ndongeza yonke i-imeyile endinxibelelana nayo ngokufanelekileyo. Kundenza ndizibuze nokuba lixesha lokuba ndifumane uluhlu lweengcali zentengiso. Ukuba ndiyayenza loo nto, mna ngeke thumela ileta yesimemo ukuze ndingabi sengozini yokwenzakalisa uluhlu lwam.
Andiqinisekanga ukuba kutheni wonke umthengisi we-imeyile engayongezi le nto kwingqokelela yezixhobo zabo. Kudos ukuya GetResponse… Bendicinga ukuba bendikhula ngokwam kuluhlu lwam. Kubonakala ngathi baphambi komdlalo.
Ufumana njani uMcebisi ngeSEO
Yandisa ukugcwala kwabantu ngezi ndlela zingama-25 zingqinisisiweyo
Sep 15, 2011 kwi-2: 19 AM
Ngumbono onesibindi kakhulu! Kodwa i-flip ecaleni-ukuba lonke unxibelelwano endilufakileyo longeze kwincwadana ngaphandle kokuba ndibuze / ndinike imvume-ndingacaphuka kakhulu.
Yongeza kuloo nto-isihloko sakho-umxholo wakho yinto eyonwabela wonke umntu. Andiqondi ukuba eli cebiso linokusebenza kuwo onke amashishini.
Sep 15, 2011 kwi-7: 59 AM
Ubetha isikhonkwane entloko, Bobbie! Ayifanelanga kuphela ukuba kufanelekile, kufuneka ibenexabiso kubaphulaphuli.
Sep 15, 2011 kwi-1: 44 AM
UDoug, bendihlala ndifunda nje izithuba kumfundi we-RSS, kodwa le ibimothusa ngokwaneleyo ukuba ingene kwaye inike ingxelo. Ndiyavuma i-100% kwaye ndiyagula ngenxa ye-imeyile yokuzama ukuzama ukwenza imveliso yabo ibe nzima xa zonke ezinye iindlela zonxibelelwano ziya zidityaniswa ngakumbi.